कोरोना संक्रमणको साइकोडेमिकबाट कसरी बच्ने ? : डा. रवीन्द्र पाण्डे | Himal Times
Home Flash News कोरोना संक्रमणको साइकोडेमिकबाट कसरी बच्ने ? : डा. रवीन्द्र पाण्डे
डा. रवीन्द्र पाण्डे, (जनस्वास्थ्य विज्ञ)
कोरोना संक्रमण इपिडेमिक, इन्डेमिक, पेन्डेमिक, इन्फोडेमिक हुँदै अहिले साइकोडेमिक भएको छ । कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा मनोसामाजिक असरहरु देखा परेका छन् । कोरोना संक्रमण अल्पकालीन हुन्छ भने मनोसामाजिक असर दीर्घकालीन हुनसक्छ । तसर्थ हामीले आहारविहार, आचार, व्यवहार र सोंचमा समयानुकुल बदल्नु जरुरी छ ।आफ्नो जीवनमा यी मन्त्र लागु गर्नुभयो भने तपाइँ स्वस्थ र मस्त हुनुहुनेछ ।
– संक्रमितको संख्या सुनेर चिन्ता नगर्नुहोस् । विश्वका धेरै देशको तुलनामा हामी निकै सुरक्षित छौं । संक्रमितको पहिचान हुनु राम्रो कुरा हो । यसले रोग रोकथाममा ठूलो सहयोग गर्दछ । तपाइले सुरक्षाका बिधि अपनाउनु भयो भने संक्रमण सर्दैन । आत्मबल र इम्युनिटी पावर बलियो भएमा संक्रमण भएपनि त्यसलाई पराजित गर्न सकिन्छ ।
– आफुलाई टिपटप राख्नुहोस् । दैनिक सेभिंग गर्ने, दिनको २ पटक दांत माझ्ने, पटकपटक कपाल कोर्ने, सफा कपडा लगाउने, सामान्य शृंगार गर्ने जस्ता अभ्यासले आत्मबल दह्रो हुन्छ । यसो गर्दा बिरामी भएको फिल हुँदैन ।
– आत्मशान्ति र भित्रि शीतलताको लागि योग तथा ध्यान गर्ने बानी बसाल्नुहोस । यसले जीवन र जगतप्रति सकारात्मक धारणा जागृत गराउंदछ ।
– अनाबश्यक बिबाद नगर्नुहोस् । यो महामारीको बेला आफ्नो, परिवारको तथा देशको चिन्तन गर्नुपर्ने समयमा राजनीतिका अनाबश्यक पक्ष/विपक्षमा बिबाद गर्नुको कुनै औचित्य छैन । तसर्थ जीवन र जगतको पक्षधर बन्ने बानी विकास गर्नुहोस् । यसले तनाब मुक्तिमा सहयोग गर्दछ ।
– सास हुनु जीवनको प्रतिक हो । प्राणायाम गर्ने, स्वच्छ हावा सेवन गर्ने, बन्द कोठामा भन्दा हावा लाग्ने ठाउँमा धेरै समय बिताउने गर्नुहोस् । यो दुर्लभ स्वच्छ हावा सेवन गर्ने अवसर नगुमाउनुहोस् ।
– प्रकृतिको यो अनुपम सौन्दर्यपान गर्न लालायित हुनुहोस् । रुख, फूल, पहाड, हिमाल, जुन, तारा आदि हेरेर धन्य हुनुहोस् । आफ्नो क्यामेरा ,मोबाइलले यो सुन्दरतालाई कैद गर्नुहोस् ।
– चराको मिठो चिरबिर सुन्नुहोस् । हावाको संगीत सुन्नुहोस् । जनावरको भाषा बुझ्नुहोस् । मंगल ध्वनि सुनेर कानलाई सिंचित गर्नुहोस् ।
– रक्सी, चुरोट, सुर्ती, गुट्खा तथा ड्रग नखानुहोस् । यी पदार्थले शरीर र मनलाई धुजाधुजा पार्छन् । रोगसंग लड्ने क्षमता घटाउँछन् ।
– कौसी, गमला, छत, करेसाबारी तथा खेतबारीमा काम गर्नुहोस् । तरकारी, फूल, फलफूल लगाउनुहोस् । माटोसंग खेल्दा असिम आनन्दबोध हुन्छ ।
– हल्ला र भ्रमको पछि नलाग्नुहोस् । सहि र आधिकारिक जानकारी लिने बानी गर्नुहोस् । हल्ला सबैभन्दा छिटो फैलिने सरुवा रोग हो । यसको सिकार नबन्नुहोस् ।
– हाम्रो चिन्ता यस्तो हुनुपर्छ जसले समस्या समाधानमा सहयोगी बनोस्।
– घरमा तथा मनमा यो मन्त्र राख्नुहोस् – यो समय पनि बितेर जानेछ । त्यसपछि हाम्रो जीवन पूर्ववत लयमा फर्किनेछ ।
Previous articleगुल्मीका काेराेना संक्रमित शिक्षकको मृत्यु,” अस्पतालले लापरबाही गय्राे:आफन्त
Next articleझापामा एकैदिन २३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
स्वदेश फर्कन डकुमेन्टको लागि अध्यागमन जाने क्रममा दुर्घटनामा परि एक नेपाली सहित ३ जनाको मृत्यु
Himal Times - January 12, 2021
आज मलेसियामा निकाे हुनेको संख्या २७२६ जना, निधन हुने ११ जना